Previous Article Ugo Naijiria Awuchie na Brazil
Next Article AFCON 2019: Naijiria, Guinea, Madagascar na Burundi N'Otu B
Mmeri a mere ka Naijiria bụrụzie ndị na-achị eze na ótù A. Ugo Ọlaedo, dịka a na-akpọ ndị egwu bọọlụ Naijiria na-erubeghị afọ iri na asaa lụrụ ọgụ ka nwoke na-agbanyeghị ndahie ha na asọmpi ahụ mere ha ji nweta mmeri.
Agbanyeghı na ọ bụ ha na-ahazi egwu na asọmpi ahụ ọtụtụ oge, Ugo Ọlaedo Naijiria tufuru ọtụtụ ohere ha nwere nke sitere n'aka Olakunle Olusegun na timkọm timkọm iri abụọ, nakwa site n'aka Wisdom Ụbanị na Ayobami Amoo bụ ndị gbafukarịsịrị bọọlụ.
Olatomi Olaniyan mepere ọnụ goolu oge o nyere goolu mbụ na asọmpi ahụ na nkeji iri abụọ na otu ebe oche goolu ndị Tanzania, Mwinyi, echeghị nke ọma.
Edmund John sara ya bụ goolu ngwangwa, dịka o were ohere na Suleman Shaibu anọghị ebe o kwesịrị ịnọ were nye goolu ahụ.
Ka nkeji asatọ gasịrị, Ụbanị bụ onye ririla goolu na mbụ mere ka ndị Naịjirịa nọrọ n'ihu dịka ọ gbanyere bọọlụ ebe aka Mwinyi agaghị eru. Amoo mere ya ọkpụ atọ ka nkeji asaa gara site na bọọlụ ahụ agbara ya site na a dọba agbaa.
Ka oge ezumike gachara, Ugo Ọlaedo Naijiria echekwaghị onwe ha nke ọma mere ha ji bụrụ ndị na-achụ n'azụ dịka enyere ha goolu atọ na nkeji asaa ebe ndị nkwado Tanzania nọ na-ekwere ha egwu mmeri. Shọtụ kpụ ọkụ n'ọnụ nke Kelvin John gbara na penarịtị abụọ nke Morice Abraham na Edmund John gbara mere ndị Naịjirịa taa kpuchie ọnụ dịka ha na-achụzi n'azụ.
Ụbanị sara site shọtụ m mara mma ọ gbara site na-adoba agbaa na nkeji iri asaa na abụọ. Na nkeji isii dị n'ihu, Ibraheem Jabaar nyeghachiri Naijiria mmeri ha jiri bụrụ Ugo Ọlaedo n'ezie. Nke a meziri Naijiria jiri were ọkpụ ise asara anọ were na-eme ngala ka asọmpi ahụ gwụrụ.
Ụbọchị Wednezdee, Ugo Ọlaedo Naijiria ga-akwatụ ya n'otu amaegwuregwu ahụ ebe ndị Tanzania na Uganda ga-achịpụ nke ha. Mmeri ga-ahụ na Naijiria nwere ohere isonye na Iko FIFA maka ndị ahụ na-erubeghị afọ iri na asaa nke afọ puku abụọ na iri na iteghete a ga-agba na Brazil bụ nke Naijiria burula ugboro ise.